ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များအခမဲ့ ၁၈ - ဗီဒီယိုချက်တင်-အချစ်အွန်လိုင်း!
ဒေါင်းလုပ်ချက်တင်ကစားတဲ့ ၆၀၃၀၅၆ အတြက္။
ရီကက်ဖက်၊၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလေ့လာသင်ယူအခမ္းအပြယ်၏လျှို့ဝှက်ချက်များကို calligraphy၊ကြိုးစားလာခေါက်ဆွဲ။ အခါသင့်မိတ်ဆွေသို့မဟုတ်ချစ်ရသူတစ်ဦးဘဝတရုတ်နိုင်ငံအတွက်၊အသက်အများကြီးပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့။ သင်၏အိပ်မက်များကိုရှာဖွေခြင်းသည်သူနီးကပ်သင်နေ့တိုင်းအပြည့်အဝအသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိ။ ဘူးဆိုၿပီးအပးသည္။ မည်သူမဆိုရှိသည်နိုင်အတွက်ကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံ။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုက်ပေါ်တွင်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်သုံးစွဲဖို့အသုံးဝင်ရွေးချယ်စရာ။ သင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်များ၊အမြင်အသုံးပြုသူများ'ဓါတ္ပံု၊မှတ်ချက်၊ပုဂ္ဂလိကပိုင်၊ဘလော့ဂ်၊အမြန်ရ။
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်စုံတစ်ဦးကအကြံပြုလိမ့်မယ်အချို့သောလန္ဒီဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်နည်းလမ်းများ။ စိတ်အားထက်သန်စွာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပြောပြရန်လိုလားအကို။ ယခင်က၊သူမဝယ်ယူအသေးအဖွဲ Kennital-ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖော်ထုတ်ခြင်းအရေ၏၁၀ ဂဏန်း၊၆ ဂဏန်းအမွေး။ တိုင်းနေထိုင်သူအိုက်ကိုဤအရေအတွက်။ သငျသညျရှိသည်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်၊ထို့နောက်သိသာနိုင်ဘူးမှတ်ပုံတင်အပေါ်။ ကောင်းသောညပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်မရဲ့မေးခွန်းကိုဖြေ။ ငါ ၃၁ အသက်အနှစ်၊ငါ၏အအလုပ်အကိုင်အသွား။ လက်ထပ်ဘယ်တော့မှ။ ငါ၏အမြဲတမ်းနေအိမ်သို့ပါမစ်တစ်ခုအတွက်မြောက်ပိုင်းပြည်မှတပါး၊ငါလက်ထပ်ဖို့အမျိုးသမီးတစ်ဦးကဒီတိုင်းပြည်ကနေ။ အဘယ်သို့ပြုရမည်နှင့်အတူလှည့်။ အဘယ်သူသည်ကမ်းလှမ်းမှုကိုမှသင်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်န်ဆောင်မှု။ ထို့အပြင်၊ငါအကြောင်းဖတ်ကြပါပြီအ deplorable ပြည်နယ်ဆေးဝါး၏အချို့ဒေသများတွင်။ ငါမြော်လင့်သင့်ရဲ့နားလည်မှုကို။ များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သင့်ရဲ့အကြံဥာဏ်၊ဒါပေမယ့်ငါမြင်ယောင်ကြည့်မရနိုငျသင်မည်သို့နိုင်ပါတယ်ရက်စွဲများအပေါ်သွားနှင့်အတူ။ငါတောင်မနေဖို့ဒီမှာပါ။အခုရာ၊ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်၊ဘာမှဖြစ်နိုင်။ ဒီတော့ဝေး၊အ misfire အဘယ်ကြောင့်အတွက်အမေရိကနှင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းရှိအဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေ-သာတူဆေးပညာတစ်ခု-ရှိလိမ့်မည်။ အတူကောလိပ်မှဘွဲ့။ သင်ဖြစ်ဖို့ရှိသည်-အခြေခံအားဖြင့်၊အရာအားလုံးစတင်သည်ခြစ်ရာကနေကြာ။ တစ်ဦးပါးစပ်တွင်းနည်းပညာရှင်သည်အခြားအရာတစ်ခုခု။ မရှိအလုပ်လုပ်။ မတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ဆေးခန်း။ အဆိုပါအလုပ်ကစေလွှတ်္။ တကယ်တော့၊သင်ထိုင်နိုင်ပြီးခံရသည်။ ဒါဟာအတူနေရာတိုင်း။ အိုက်မည်အတော်လေးကွဲပြားခြားနားသည်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်မသံသယ။ အထူးသဖြင့်ကတည်းကဤသည်ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်သည်အမြတ်အစွန်းဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက်ထိုင်နှင့်အလုပ်၊အရေးအပါဆုံးအရာအတွက်ဒီလက်။ ကောင်းသောညပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်မရဲ့မေးခွန်းကိုဖြေ။ ငါ ၃၁ အသက်အနှစ်၊ငါ၏အအလုပ်အကိုင်အသွား။ မလက်ထပ်ဘယ်တော့မှခဲ့သည်။ ကျွန်မတကယ်နေချင်တဲ့အမြဲတမ်းအတွက်မြောက်ပိုင်းပြည်မှတပါး၊ငါလက်ထပ်ဖို့အမျိုးသမီးတစ်ဦးကဒီတိုင်းပြည်ကနေ။ အဘယ်သို့ပြုရမည်နှင့်အတူလှည့်။ အဘယ်သူသည်ကမ်းလှမ်းမှုကိုမှသင်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်န်ဆောင်မှု။ ထို့အပြင်၊ငါအကြောင်းဖတ်ကြပါပြီအ deplorable ပည္နယ္၏ဆေးပညာအတွက်အမျိုးမျိုးသောနယ်ပယ်။ ငါမြော်လင့်သင့်ရဲ့နားလည်မှုကို။ ဒါပေမဲ့၊ကံမကောင်းစွာ၊လန္ဒီ။ အလွန်အနည်းဆုံး၊သင်နိုင်ရေးအတွက်ဗမာဦးခေါင်းမှဒီအဖွဲ့အစည်း၊ဘယ်သူနိုင်မည်အကြောင်း၊သင့်ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေဆိုရန်။.
အင်တာနက်ကိုအရှည်မည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အချိန်တွင်နိုင်မကြည့်သူတို့၏အသက်တာမပါဘဲ။ ကျနော်တို့အရာအားလုံးကိုလုပ်ဖို့အင်တာနက်ပေါ်မှာအများ:ကျနော်တို့ဆက်သွယ်ဖို့၊အမိန့်အစားအစာ၊အဝတ္အထည္မ်ား၊ရွေးချယ်တဲ့ကား၊အိမ်ခြံမြေနှင့်ပင်အချို့၊သူတို့ရဲ့တှေ့အခြား။။။။။ လူသားသည်လူမှုဖြစ်ခြင်း၊ဒါကြောင့်သူအသက်မရှင်နိုင်ပါပါဘဲ။ အခုနောက်ပိုင်း၊များစွာသောလူမေတွန့်ဆုတ်သောအခါရတဲ့အကျွမ်းနှင့်အတူနေ့စဉ်အသက်တာ၊ဒါကြောင့်အလိုလူတွေ၊ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူတက်လာထိုကဲ့သို့သောတစ်မူထူးခြားသောလမ်းဖြစ်ဆက်သွယ်ရေး၏ချက်တင်ကစားတဲ့-ဤအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြု။ စိတ်ဝင်စားစရာနည်းလမ်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ကြောက်တရားနဲ့စိတ်ခံစားမှုအဖြစ်ကူညီရှာဖွေအတွက်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်ဆက်ဆံရေး။ ဗီဒီယိုချက်တင်-အကစားတဲ့နိုင်မှသာအလုပ်:မျက်နှာပြင်နှင့်ကီးဘုတ်၊ဒါပေမယ့်လည်းဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်သည့်အခါ၊သင်သိအတိအကျဘာကိုသင့်ရဲ့ interlocutor နဲ့တူလှပါတယ်။ ဤသည်အလွန်အရေးကြီးကာလအတွင်းအစည်းအဝေး၊ပဲသင်မှတ်မိနေလိမ့်မည်အကြိမ်မည်မျှသင်ဖန်ဆင်းအမှားတွေအခါလူအတင်အခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့စက်ဝိုင်းသို့မဟုတ်အဓိကဓါတ္ပံုကအဲဒီအပေါ်မှာယစ်ခြားလူများ။ဗီဒီယိုစကားပြောဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုသူတစ်-ဖော်ရွေမွတ္ထားတီထွင်သည်လူအပေါင်းတို့၏အသက်အရွယ်ကနေ၁၈ အသက်အနှစ်၊လူအတော်များများသုံးစွဲချက်တင်အတွက်နည်းလမ်းအဖြစ်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုနှင့်ဆက်သွယ်ရေး။ ဒါပေမယ့်အရေးအပါဆုံးအရာသင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးရှာတွေ့မှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အဖော်ကိုယ်ကစားတဲ့ပြုပါမည်ဟုသင်တို့အဘို့။ ဒါဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည်သူကိုမြင်ရဖို့သင်ရင်ဆိုင်ရမည်ကိုဤအချိန်။ စကားပြောလိမ့်မည်အများဆုံးအလွယ်တကူနှင့်အဆင်ပြေလမ်းဆက်သွယ်ဖို့သင်တို့အဘို့အ၊နှင့်ဤဖြစ်ကြောင်း၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံးနှင့်အရေးကြီးအားသာချက်။ မထင်စကားပြောသည်များအတွက်သာရည်ရွယ်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးအပေါ်ဝဘ်သည်ဆန့်ကျင်ပေါ်၊များစွာသောလူအရမ္းရီချိန်းတွေ့၊ သူတို့ဆက်သွယ်နှင့်အတူအသီးအသီးအခြားအပေါ်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာ၊အနုပညာ၊နိုင်ငံရေး၊သဘာဝ၊လဲလှယ်အတွက်အတွေ့အကြုံသည္၊စိတ်ဝင်စားဖို့ကိုရှာဖွေခရီး၊ဒါကြောင့်အပေါ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊အဆိုပါရွေးချယ်မှုကို၏ရင်ခုန်စရာဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဆက်ဆံရေးဖယ်ကျဉ်မထားပေ၊တစ်ဦးတယောရာခိုင်နှုန်းကိုဖန်တီးခဲ့ကြသူအစုံတွဲများဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အားကောင်းတဲ့မိသားစုကြီးတွေ့ဆုံအားဖြင့်အင်တာနက်ပေါ်မှာ။.
အင်တာနက်ကိုအရှည်မည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အချိန်တွင်နိုင်မကြည့်သူတို့၏အသက်တာမပါဘဲ။ ကျနော်တို့အရာအားလုံးကိုလုပ်ဖို့အင်တာနက်ပေါ်မှာအများ:ကျနော်တို့ဆက်သွယ်ဖို့၊အမိန့်အစားအစာ၊အဝတ္အထည္မ်ား၊ရွေးချယ်တဲ့ကား၊အိမ်ခြံမြေများ၊နှင့်အချို့ပင်အတွေ့သူတို့ရဲ့အခြား။။။။။ လူသားသည်လူမှုဖြစ်ခြင်း၊ဒါကြောင့်သူအသက်မရှင်နိုင်ပါပါဘဲ။ အခုနောက်ပိုင်း၊များစွာသောလူမေရမှတွန့်ဆုတ်ကျွမ်းနှင့်အတူနေ့စဉ်အသက်တာ၊ဒါကြောင့်အဘို့အထိုကဲ့သို့သောလူပြီထိုကဲ့သို့သောတစ်မူထူးခြားသောလမ်းဖြစ်ဆက်သွယ်ရေး၏ချက်တင်ကစားတဲ့-ဒါဟာစိတ်ဝင်စားစရာနည်းလမ်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ကြောက်တရားနဲ့စိတ်ခံစားမှုအဖြစ်ကူညီရှာဖွေအတွက်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်ဆက်ဆံရေး။ ဗီဒီယိုချက်တင်-အကစားတဲ့နိုင်မှသာအလုပ်:မျက်နှာပြင်နှင့်ကီးဘုတ်၊ဒါပေမယ့်လည်းဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်သည့်အခါ၊သင်သိအတိအကျဘာကိုသင့်ရဲ့ interlocutor နဲ့တူလှပါတယ်။ ဤသည်အလွန်အရေးကြီးကာလအတွင်းအစည်းအဝေး၊ပဲသင်မှတ်မိနေလိမ့်မည်အကြိမ်မည်မျှသင်ဖန်ဆင်းအမှားတွေအခါလူအတင်အခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့စက်ဝိုင်းသို့မဟုတ်အဓိကဓါတ္ပံုကအဲဒီအပေါ်မှာယစ်ခြားလူများ။ ဗီဒီယိုစကားပြောဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုသူတစ်-ဖော်ရွေအသုံးျလူအပေါင်းတို့၏အသက်အရွယ်ကနေ ၁၈ အသက်အနှစ်။ မည်မျှလစဉ်သုံးစကားပြောဖို့တစ်လမ်းအဖြစ်အောင်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆို။ ဒါပေမယ့်အရေးအပါဆုံးအရာသင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးရှာတွေ့မှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အဖော်ကိုယ်ကစားတဲ့ပြုပါမည်ဟုသင်တို့အဘို့။ ဒါဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည်သူကိုမြင်ရဖို့သင်ရင်ဆိုင်ရမည်ကိုဤအချိန်။ အစကားပြောမည် အများဆုံးအလွယ်တကူနှင့်အဆင်ပြေလမ်းအများ၏ဆက်သွယ်ရေးအတွက်၊နှင့်ဤသည်၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံးနှင့်အရေးကြီးအားသာချက်။ မထင်စကားပြောသည်များအတွက်သာရည်ရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအပေါ်ဝဘ်သည်ဆန့်ကျင်ပေါ်၊များစွာသောလူအရမ္းအားဖြင့်ရိုးရှင်းပြီးအသိအကျွမ်း၊အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုအသီးအသီးအခြားအပေါ်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာ၊အနုပညာ၊နိုင်ငံရေး၊သဘာဝ၊ချိန်းတွေ့အကြုံအတွက်၊ရှာတွေ့ခရီးသြားမ်ား၏အကျိုးစီးပွား၊နှင့်တော့။ ဟုတ်ပါတယ်၊အဆိုပါရွေးချယ်မှုကို၏ရင်ခုန်စရာဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဆက်ဆံရေးဖယ်ကျဉ်မထားပေ၊တစ်ဦးတယောရာခိုင်နှုန်းကိုဖန်တီးခဲ့ကြသူအစုံတွဲများဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အားကောင်းတဲ့မိသားစုကြီးတွေ့ဆုံအားဖြင့်အင်တာနက်ပေါ်မှာ။
ఆన్లైన్ డేటింగ్ లో స్టట్గర్ట్
ချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူအွန်လိုင်းသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုမပါဘဲ ဗီဒီယိုချက်တင် ၁၈ မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဗီဒီယို စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဗီဒီယိုချက်တင် ချက်တင်ကစားတဲ့မပါဘဲအွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ မပါဘဲဗီဒီယိုချက်တင် ၁၈ အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်ချိန်းတွေ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဘယ်မှာတွေ့တဲ့မိန်းကလေးက စုံတွဲဗီဒီယိုချိန်းတွေ့